जुलुस गर्न नेपाली काँग्रेससँग पैसा छैन : सभापति देउवा - Nepalpatra Nepalpatra जुलुस गर्न नेपाली काँग्रेससँग पैसा छैन : सभापति देउवा - Nepalpatra
जुलुस गर्न नेपाली काँग्रेससँग पैसा छैन : सभापति देउवा
देउवा भन्छन, ‘जुलुस निकाल्न हामीसँग पैसा छैन’
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जुलुस गर्न पैसा नभएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलन आज बिहीबार उद्घाटन गर्दै देउवाले आफूहरुले ठूलो जुलुस ल्याउन नसक्ने र त्यसका लागि पैसा पनि नभएको बताएका हुन् ।
संसद् विघटन संवैधानिक, असंवैधानिक भएपनि जुलुस निकाल्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका हुन् । संसद विघटनको विषयमा अदालतले गर्ने फैसला कुर्न आग्रह गरेका छन् । जुलुसकै आधारमा फैसला गर्ने हो भने न्यायालय किन चाहियो ? भनेर उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
उनले भने, ‘सडकमा जुलुस ल्याएर न्याय पाइँदैन । जुलुसमा कति मान्छे आए भनेर हुन्छ ? त्यत्रो जुलुस ल्याउन हामीसित पैसा पनि छैन । ठाउँ-ठाउँमा जबर्जस्ती बोलाउन पनि सकिँदैन । ‘कि त प्रचण्डको जुलुस ठूलो होला कि त ओलीको हुन्छ । हाम्रो त हुँदैन । जुलुसकै आधारमा फैसला गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ।’
धानमन्त्री ओलीले हठात् संसद विघटन गरेर ठूलो ध्रुवीकरण गरेको देउवाले दाबी गरे । देउवाले संसद् विघटन संवैधानिक, असंवैधानिक र अर्कोतिर अदालतमा रहेको मुद्दामा केन्द्रित रहेर संसद् पुन:स्थापना या चुनाव हुनुपर्ने भन्ने चार कुरामा देशभरी पक्ष विपक्ष देखिएको बताए ।
उनले कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य आन्दोलनमा बोलाए पनि नआउने दाबी गरेका हुन् । प्र संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले अदालतलाई यसो गर उसो गर भन्न नमिल्ने बताए । उनले नेपाली कांग्रेसले के गर्ने भन्नेबारे बैठक भइरहेको बताए ।
#नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ